Ny Kaominin'i Paris tamin'ny 1871 | Overview and facts
History & Culture Revolisionina & Rebellions
Ny zavatra tokony ho fantatra momba ny Kaominin'i Paris tamin'ny taona 1871
Inona izany, inona no nahatonga azy io, ary ahoana no nanentanana ny saina marxista
Ny Kaominina Paris dia governemanta demokraty nentim-paharazana izay nitondra an'i Paris tamin'ny 18 martsa ka hatramin'ny 28 Mey 1871. Notaomin'ny politika Marxista sy ny tanjon'ny revolisiona an'ny Fikambanan'ny Mpikaroka Iraisam-pirenena (fantatra amin'ny hoe International First), dia niray hina ny mponin'i Paris ny fitondrana Frantsay izay tsy nahavita niaro ny tanàna avy amin'ny fahirano Prussian , ary namorona ny governemanta voalohany demokratika voalohany tao an-tanàna sy tany Frantsa.
Ny filankevitra voafidy tao amin'ny Kaominina dia nandao ny politikan'ny sosialista ary niandraikitra ny asa an-tanindrazana nandritra ny roa volana mahery, mandra-pialan'ny tafika Frantsay ny tanàna ho an'ny governemanta Frantsay, namono ireo Parisiana am-polon-taona an'arivony mba hanao izany.
Fihetsiketsehana mankany amin'ny Kaominina Paris
Ny Kaominin'i Paris dia niforona teo am-pelatanan'ny tafika an-dalamby nisy teo anelanelan'ny Repoblika fahatelo Frantsa sy ny Prussians, izay nanao fahirano ny tanànan'i Paris nanomboka tamin'ny 1870 ka hatramin'ny Janoary 1871 . Nifarana ny fanaovana fahirano tamin'ny famoahana ny tafika Frantsay tamin'ny Prussiana ary ny sonia ny fiadiana ny amboara hanafoanana ny ady amin'ny Ady Franco-Prussian.
Tamin'io vanim-potoana io dia nanana mpiasa be mpampiasa i Paris, ary mpiasa an-jatony tapitrisa tapitrisa ary olona an-jatony an'arivony no nampiasaina ara-toekarena sy ara-politika nampijaly nataon'ny governemanta sy ny rafitra famokarana kapitalista , ary sahirana ara-bola ny ady.
Maro tamin'ireo mpiasa ireo dia miaramila miaramila avy amin'ny National Guard, tafika an-tsitrapo niasa mba hiaro ny tanàna sy ny mponina nandritra ny fahirano.
Rehefa nosoniavina ny tafika ary ny Repoblika fahatelo dia nanomboka ny fitondrany, ireo mpiasan'i Paris ary natahotra fa ny governemanta vaovao dia hametraka ny firenena hiverina amin'ny fitondram-panjaka , satria maro ireo mpanao fihetsiketsehana no nanompo tao.
Rehefa nanomboka nandray fiofanana ny Kaominina dia nanohana ny anton'izany ny mpikambana ao amin'ny Guardada ary nanomboka niady tamin'ny tafika Frantsay sy ny governemanta efa misy mba hifehy ny tranobe sy ny fiarovana lehibe ao Paris.
Talohan'ny fakana an-kerisetra, ireo Parisiana dia naneho matetika ny fangatahana governemanta voafidy ho an'ny tanànany. Ny fifanandrinana teo amin'ireo mpisolovava ho an'ny governemanta vaovao sy ny governemanta efa misy dia nihamafy taorian'ny vaovao momba ny famotsorana frantsay tamin'ny Ôktôbra 1880, ary tamin'io fotoana io dia natao ny fanandramana voalohany handray ny governemanta ary hamorona governemanta vaovao.
Taorian'ny fihetsiketsehana, mbola nihanitombo ny fifandirana tao Paris ary tonga teo amin'ny lohany tamin'ny 18 martsa 1871, rehefa nahatratra ny tranon'ny governemanta sy ny fitaovam-piadiana ny mpikambana ao amin'ny National Guard.
Ny Kaominin'i Paris - Roa volana amin'ny sosialista, fitsipika demokratika
Taorian'ny nipetrahan'ny Guardana Nasionaly ny tranokalan'ny governemanta sy ny tafika tao Paris tamin'ny Martsa 1871, dia nanomboka niforona ny Kaominina tamin'ny maha mpikambana ao amin'ny Kaomity Afovoany azy ireo nandamina fifidianana demokratika mpanolotsaina izay hitondra ny tanàna amin'ny anaran'ny vahoaka. Mpikambana enina amby roapolo no voafidy ary nampiditra mpiasa, mpandraharaha, mpiasa an-trano, mpanao gazety, sy manam-pahaizana ary mpanoratra.
Nanapa-kevitra ny filankevitra fa tsy hanana mpitarika tokana na ny manana fahefana mihoatra noho ny hafa ny Kaominina. Raha ny tokony ho izy dia niasa ara-demokratika izy ireo ary nanapa-kevitra tamin'ny alalan'ny fifanarahana.
Taorian'ny fifidianana ny filankevitra, ny "Communards", araka ny niantsoana azy ireo, dia nametraka andiana politikam-pahaizana sy fomba fanao izay mamaritra izay tokony ho fitovian'ny governemanta sosialista sy demokratika . Ny politikan'ny politikany dia nifantoka tamin'ny takarivan'ny loharanom-pahefana efa misy, izay nanolotra tombontsoa ho an'ny fahefana sy ny kilasy ambony ary nampahory ny sisa amin'ny fiarahamonina.
Nofoanan'ny Kaominina ny fanamelohana ho faty sy ny fepetra miaramila . Nikatsaka ny hanakorontana ny rafitra ara-toekarena ara-toekarena izy ireo, dia namita ny asa alina tao an-tanimbolin'ny tanàna, nanome alalana ny fianakavian'ireo maty nandritra ny fiarovana ny Kaominina, ary nanamontsana ny fiantohana ny trosa.
Ny fikarakarana ny zon'ny mpiasa amin'ny tompon'ny orinasa dia nanambara ny Kaominina fa afaka mandray andraikitra ny mpiasa raha nilaozan'ny tompony izy ary nandrara ny mpampiasa tsy handoa ny mpiasa ho toy ny endrika fananarana.
Ny Kaominina koa dia nifehy tamin'ny foto-pinoana sy nananganana ny fisarahana ny fiangonana sy ny fanjakana . Nolazain'ny Filankevitra fa tsy tokony ho anisan'ny fampianarana ny fivavahana ary ny fananan'ny fiangonana dia tokony ho fananana ho an'ny olon-drehetra ampiasaina.
Ny Communards dia nanolo-tena ho fananganana ny kaominina any amin'ny tanàna hafa any Frantsa. Nandritra ny fotoana nanjakany dia nisy hafa niorina tany Lyon, Saint-Etienne, ary Marseille.
Fihetsiketsehana sosialista vetivety
Ny fohy fohy nataon'ny Kaominin'i Paris dia nahitana ny fanafihan'ny tafika Frantsay izay niasa tamin'ny anaran'ny Repoblika fahatelo, izay navitrika tany Versailles . Ny 21 May 1871, nanafika ny tanàna ny tafika ary namono Parisiana an'arivony maro, anisan'izany ny vehivavy sy ny zaza, amin'ny anaran'ny fanavaozana ny tanàna ho an'ny Repoblika fahatelo. Nifanohitra ny mpikambana ao amin'ny Kaominina sy ny mpiambina nasionaly, saingy tamin'ny 28 May, ny tafika dia nandresy ny Fiarovam-pirenena ary ny Kaominina dia tsy nisy intsony.
Ankoatra izany, an'arivony maro no nogadrain'ny tafika, ary maro tamin'izy ireo no novonoina. Ireo izay novonoina nandritra ny "herinandro feno herisetra" sy ireo novonoina am-ponja dia nalevina tao anaty fasana tsy fantatra anarana manodidina ny tanàna. Iray amin'ireo toerana famonoana kamboty no tao amin'ny fasan'i Père-Lachaise malaza, izay misy ny fahatsiarovana ny voavono ankehitriny.
Ny Kaominina Paris sy Karl Marx
Ireo izay mahafantatra ny fanoratr'i Karl Marx dia mety manaiky ny politikany amin'ny antony manosika ny Kaominin'i Paris sy ny soatoavina izay nitarika izany nandritra ny fotoana fohy. Izany no antony nahatonga ireo kamboty nentim-paharazana, anisan'izany i Pierre-Joseph Proudhon sy Louis Auguste Blanqui, ary nirotsaka avy amin'ny soatoavina sy politika avy amin'ny Fikambanan'ny Mpikaroka Iraisam-pirenena (fantatra amin'ny hoe International International). Ity fikambanana ity dia toeram-pampandrosoana iraisam-pirenena amin'ny hetsista, ny kaominista, sosialista ary ny hetsiky ny mpiasa. Niorina tany Londres tamin'ny taona 1864 i Marx, mpikambana mavitrika, ary ireo fitsipika sy tanjon'ny fikambanana dia naneho ireo izay nambaran'i Marx sy Engels tao amin'ny Manifesto an'ny Antoko Komonista .
Ny iray dia afaka mahita ny antony sy ny zavatra nataon'ireo Kominara ny fahatsiarovan'ny kilasy izay ninoan'i Marx fa ilaina amin'ny revolisionan'ny mpiasa hitranga. Raha ny marina dia nanoratra momba ny Kaominina tao amin'ny Ady tamin'ny ady an-trano tany Marseille i Marx raha ny zava-nitranga ary nilaza azy ho modely ho an'ny governemanta revolisionera.
Diary ho an'ny Revolisiona Rosiana: 1905
Ny tetik'asa Gunpowder 1605: Henry Garnet sy ny Jesuit
Ny Revolisiona Rosiana tamin'ny 1917
Antony mahatonga ny revolisiona Rosiana
Ny fizotry ny Revolisiona Rosiana: Ady tamin'ny 1914-1916
Ady amin'ny Tantsaha Alemana (1524 - 1525): Fitroarana ny mahantra
Revolisionera sosialy (SRs)
Diary ho an'ny Revolisiona Rosiana: Fampidirana
Ny Revolisiona alemana tamin'ny 1918-19
Foto-kevitry ny Revolisiona Rosiana: 1918
Ny fizotry ny Revolisiona Rosiana: 1906 - 1913
Mandeha Amim-pahendrena ve ny Sekolin'ny Lalàna?
5 Tena zava-nahagaga nahitana fahombiazana
Vokatry ny ady adin'ny Zulu
Mialà amin'ny bokin'i Neal Shusterman Book Review
Facts About Colonial Maryland
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Massachusetts
Mpihinana haingam-pandeha lehibe ao amin'ny test cricket
Fandaharam-pianarana Taona 1-Taona
Afoin'ny biby 666
Mahatonga ny ranonorana ho solon'ny hoditra ve ny fangirifiriana?
Sarin'ny Serial Killer Joseph Paul Franklin
Inona no lanjan'ny solika tsara ho an'ny Nissan Maxima?
Nahoana no mamolavola ny tranonkala ny Spiders?
Ny Ady Lehibe Faharoa: USS Randolph (CV-15)
6 Ecclesial Epic Books
Feminisma sy ny fianakaviana nokleary
Ireo Maherin'ny Grika fahiny sy Roma
Ny fomba hanoratana ny biografia mahaliana
Ahoana no nahafatesan'i William Shakespeare?
Iza moa ny Kananita?
Ireo endriky ny fitoviana sy ny fahasamihafana amin'ny teny espaniola sy anglisy